Iro Ramangwana reB2B Kutengesa: Kusanganisa Mukati & Kunze Timu | Martech Zone
Iro Ramangwana reB2B Kutengesa: Kubatanidza Mukati & Kunze Timu
Muvhuro, Nyamavhuvhu 10, 2020 Muvhuro, Nyamavhuvhu 10, 2020 Lindsay Duran
Iyo COVID-19 denda yakamisa mhedzisiro inokonzeresa mukati meiyo B2B mamiriro, pamwe zvakanyanya kunyanya kutenderera mashandiro ari kuitika. Zvirokwazvo, kukanganisa kune kutenga kwevatengi kwave kwakakura, asi zvakadii nezvebhizinesi kune bhizinesi?
Maererano ne Iyo B2B Ramangwana Shopper Chirevo 2020, inongova 20% yevatengi vanotenga yakananga kubva kutengesa reps, pasi kubva ku56% mugore rapfuura. Chokwadi, simba reAmazon Bhizinesi rakakosha, asi 45% yevakabvunzurudzwa vakapindura kuti kutenga pamhepo kunonyanya kuomarara pane kuita pasiri pamhepo
Izvi zvinoratidza kuti yechinyakare yekutengesa chiteshi musanganiswa nirvana yemukati nekunze zvikwata zvekutengesa zvanyonganiswa zvakanyanya. Ecommerce ikozvino chiteshi chakakosha nemakambani anomhanyisa kuitira kuti zvive nyore kuti vatengi vatenge kubva kwavari online, mukati mekutengesa zvikwata zvinokurumidza kugadziridzwa kuita mabasa avo kubva kumba, uye matavi uye masitoreti ezvitoro zvakaramba zvakavhurika kana zvichionekwa zvakakosha. Vatengesi vemumunda vakaita zvese zvavaigona kuti vakurumidze kugadzirisa avo akajairika mabasa pane nhunzi kuti iwanikwe kune vatengi vavo vasingakwanise kuvadana ivo pachavo.
Vanoda kusvika makumi mapfumbamwe muzana ezvekutengesa vatamira kune vhidhiyooconferencing / foni / webhu yekutengesa modhi, uye nepo kumwe kusahadzika kuchiripo, inopfuura hafu vanotenda kuti izvi zvakaenzana kana kuti zvinobudirira kupfuura mhando dzekutengesa dzakashandiswa pamberi pe COVID-90.
McKinsey, Iyo B2B yedhijitari inflection poindi: Maitiro ekutengesa zvachinja sei panguva yeCOVID-19
Ramangwana renzvimbo yekutengesa rakachinja nekukurumidza pasi pemutoro wekukanganisa, asi vatungamiriri vebhizimusi vane hunyanzvi vari kugadzirisa mu-nhanho, vachishandisa fungidziro yekutengesa analytics kusanganisa mukati nekunze kwekutengesa uye zvirinani kushandira mutengi wega wega.
Asina Kuburitswa Mukana murefu Muswe weVatengi Maakaundi
Mukati mekambani yeB2B, 20% yevatengi base inowanikwa mu yakasarudzika account chikamu - uye nechikonzero chakanaka.
Hazvina kujairika kuti makumi masere muzana emari ichatorwa kubva padanho repamusoro reakaundi. Zvakakodzera, ivo vane ruzivo rwekutengesa reps vanogadzwa nekuchengetedza uye kukura ihwohwo hukama.
Nekufamba kwenguva, kuburikidza neyakagadzirwa chigadzirwa kuwanda kana kubatanidzwa uye kuwanikwa, makambani akura kusvika padanho rakaomarara iro panguva imwe chete rinokumbira vatengesi reps kuti vabhadhare maakaundi akawanda vachibvuma izvo, nekuita kudaro, huwandu hwakakura hwevatengi havasi kugamuchira yakatsaurirwa kutarisirwa kunodiwa chengetedza nekukura chikwama chemari. Nekudaro, pamberi pe COVID-19 kukanganiswa, inokumbira iwo mubvunzo: Marii yauri kurasikirwa nayo mumuswe murefu?
Zviwanikwa kubva kune yedu global benchmark mushumo ratidza kuti mukana wese uripo wekupa simba rekutengesa reps kuchengetedza uye kukura maakaunzi mukati mako iripo vatengi chigaro chakakosha. Panyaya yemutengi churn uye kutengesa-kutengesa, makambani eB2B anokundikana kutora chero kupi kubva pa7% kusvika 30% yemari inowanikwa.
Dhawunirodha Global Benchmark Report
Iro Ramangwana reB2B Kutengesa: Kubatanidzwa kweMukati nekunze Kwekutengesa
Sezvacherechedzwa neshumo yaMcKinsey, vekunze kana vekutengesa munda vashanduri vari kushanda zvakanyanya sevamwe mukati mevatengesi. Iyo nguva yakachengetedzwa yekufamba uye kushanyira maakaunzi avo epamusoro inopa mukana mutsva, wakafungidzirwa weiyi timu ine hunyanzvi-yekutengesa: Shandura yavo chena-giravhosi nzira yekutengesa yakanangana nemuswe murefu wenyaya dzevatengi uye uvape simba rekubata mutengi wese seakakosha account.
Uyu muswe murefu wenyaya dzevatengi, dzimwe nguva unonzi maakaunzi edzimba mukuparadzira, anowanzo shandiswa kana uchishanyira bazi kana kufona mukati pavanenge vachida chimwe chinhu. Shandisa iyo ichangobva kuwanikwa bandwidth yekunze yekutengesa zvikwata nekuvapa kukura uye kugadzirisa zviito zvekutora nevatengi ava. Predictive kutengesa analytics inogona kukurumidza kuendesa aya mazinga pachiyero, accounting kune vese vatengi uye zvigadzirwa zvikamu.
Kufanotaura kwekutengesa analytics inogadzira zviito zvekukura neepamberi data sainzi kuti igadzire akakodzera mapeteni mapuremu akavakirwa pane akanakisa vatengi vekambani, vachifunga mashandisiro emapatendi, yakazara mari, uye hupamhi hwezvigadzirwa zvakatengwa. Tichishandisa kusanganisa uye kudyidzana-kwakavakirwa algorithms, inowirirana mutengi wega kune yepedyo yekutenga pateni chimiro kutungamira reps yakanangana nezvinhu izvo vatengi vasiri kutenga izvozvi… asi zvinofanirwa kunge zviri.
Inofumurawo zviito zvekudzoreredza nekuzivisa "vari panjodzi" vatengi vari kuratidza zviratidzo zvekutanga zvekutsauka pane chimwe kana zvimwe zvigadzirwa zvezvikwata vachishandisa yepamusoro, patent algorithms yekushandira kumusoro kwakanangana nenzvimbo uko mari iri kuderera kana kuti yarasika zvachose. Yakapesaniswa neyechinyakare bhizinesi ungwaru kuburitsa, nzira iyi inobvisa ruzha nekuverengera kwekutenga-kutenderera mapatani, mwaka, kutenga-kamwe-nguva kutenga, kana kusagadzikana kwekutenga maitiro, kuti ubvise manyepo enhema kubva mukudzoserwa kwekuona.
Predictive sales analytics yatove kushandiswa zvakanyanya mumakambani eB2B ane yakakwira velocity uye kudzoreredza, senge kugoverwa kwechikafu. Kana iwe uine fungidziro yekutengesa analytics munzvimbo nhasi, kuisa pamberi peiyi nzwisiso kune iyo refu muswe wemaakaunzi ekunze kwekutengesa reps zviri nyore kuita. Kana iwe usati uine fungidziro yekutengesa analytics munzvimbo, kutanga kwakananga uye kunogona kurarama mubhizinesi rako mukati memavhiki mashoma.
Tags: b2bcoronavirusCOVID-19mukati mekutengesalockdownskunze kwekutengesakutengesa fonifungidziro yekutengesa analyticsyekutengesa chiteshimaakaundi akajekavideoconferencingwebhu kutengesazilliant
Lindsay Duran ndiye mukuru wekushambadzira kuZilliant, kwaanotarisira kukurumidza nzira dzekukura, kudiwa kwechizvarwa, kushambadzira kwechigadzirwa, kutaurirana kwekambani, kugoneswa kwekutengesa, uye kumisikidzwa pamusika. Muvakidzani mukutengesa nekushambadzira, Duran akashanda zvakanangana nemakambani eB2B kuti aone uye kugadzirisa akasiyana mitengo, kutengesa, uye matambudziko emari.